Lego Architecture Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Architecture Black Friday သည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့၏ မူလအရွယ်ရောက်ပြီးသူ အာရုံစိုက်သည့် ဆောင်ပုဒ်သည် 2021 ခုနှစ်တွင် အနည်းငယ် တိတ်ဆိတ်သွားသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြီးမားသောအရာများကို မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ Lego Architecture ဖြတ်. Black ကသောကြာနေ့.
နောက်ဆုံး LEGO Architecture အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
Zavvi လက်တစ်ဆုပ်စာအတွက် လျှော့စျေးများကို လောလောဆယ် ကမ်းလှမ်းနေသည်။ Architecture ၎င်းတို့၏ UK နှင့် US sites နှစ်ခုလုံးတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးထွက်သမျှကို ခြေရာခံပါ။ Black ကသောကြာနေ့ ဤနေရာတွင် အပေးအယူများပြီး နေ့စဉ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြန်ကြည့်ပါ။
21052 ဒူဘိုင်း - ယခု£ 54.99, £ 42.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21034 လန်ဒန် - £44.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု 35.99 ဖြစ်သည်။
Liberty ၏ 21042 ရုပ်ထု - ယခု£ 89.99, £ 62.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး - ယခု£ 89.99, £ 62.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21054 အိမ်ဖြူတော် - ယခု£ 89.99, £ 62.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21028 နယူးယောက် - ယခု£ 44.99, £ 29.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21051 တိုကျို - ယခု£ 54.99, £ 37.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21044 ပဲရစ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
21051 တိုကျို - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
21034 လန်ဒန် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
Lego Architecture အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
အသစ်စက်စက် တစ်မျိုးတည်းသာ Lego Architecture set သည် ပုံစံဖြင့် 2021 ခုနှစ်တွင် စင်ပေါ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၀၁၈၉ Taj Mahal. ဒါပေမယ့် အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ Lego Architecture ယခင်နှစ်များမှ ရရှိနိုင်သော အတွဲများ LEGO.com အကြိုက်များ အပါအဝင် အခြားနေရာများ Liberty ၏ 21042 ရုပ်ထု, 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး, 21051 တိုကျို နှင့် 21028 နယူးယောက် City.
၎င်းတို့အနက်မှမဆို လျှော့စျေးများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ စျေးဝယ်ကာလ၊ နေစဉ် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal ယူကေတွင် ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၁၉.၉၉ နှင့်ဥရောပ၌ ၉၉.၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည့်စျေးအပြည့်ဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သောမည်သည့်လက်ဆောင်ကိုမဆိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
Lego Architecture London Black Friday အရောင်းအ၀ယ်များ
မှတစ်ခုဖြစ်သော Lego Architecture အပြင်အဆင်၏ အရှည်လျားဆုံး ကောင်းကင်ယံများ - ပြီးလျှင် ဒုတိယ 21028 နယူးယောက် City - ဖြစ်ပါတယ် 21034 လန်ဒန်2017 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ထိ ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော အစုံသည် မကြာမီ မည်သည့်နေရာမှ မသွားသေးသော်လည်း (အနည်းဆုံး အဆိုအရ၊ Brick Fanatics'အရင်းအမြစ်များ) ၎င်း၏အသက်အရွယ်သည် လျှော့စျေးများအတွက် ရင့်မှည့်နေသေးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Black ကသောကြာနေ့.
Lego Architecture skylines Black Friday စျေးများ
ပိုမိုကျယ်ပြန် Lego Architecture skylines subtheme ကို 2021 တွင် ခေတ္တရပ်ထားပုံရပြီး 2020 မှစ၍ စွဲမက်ဖွယ်အသစ်များ ထပ်တိုးခြင်းမရှိပါ။ 21051 တိုကျို နှင့် 21052 ဒူဘိုင်း. ကောလာဟလများ အရ ၎င်းသည် စင်ကာပူကို အခြေခံ၍ 2022 ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင်မစုဆောင်းရသေးသည့် မော်ဒယ်လ်ဟောင်းများကို ဆိုလိုသည် –partအထူးသဖြင့် အဲဒါတွေ ဒီနှစ်အနားယူ, ကဲ့သို့ 21043 San Francisco က - ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ရမည်။ Black ကသောကြာနေ့.
၎င်းတို့သည် ရက်ရက်ရောရော လျှော့စျေးများအတွက် ဖွင့်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်သာမက နောက်ပိုင်းဈေးကွက်တွင် စျေးနှုန်းများ တက်လာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 21026 Venice နှင့် 21027 Berlin ကဲ့သို့သော အစောဆုံး ကောင်းကင်ယံများသည် eBay နှင့် BrickLink တွင် ထိပ်တန်းဒေါ်လာစျေးကို ယခုအခါ ၎င်းတို့၏မူရင်းလက်လီစျေးနှုန်းများထက် ကျော်လွန်၍ ရယူသွားပါသည်။
Lego Architecture အငြိမ်းစားယူခြင်း Black Friday သဘောတူညီချက်များ
စုစုပေါင်းငါးယောက် Lego Architecture အစုံရှိပါတယ် စင်ပေါ်စွန့်ခွာရန်ကြောင့် အပါအ ၀ င် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် 21043 San Francisco က, 21045 Trafalgar ရင်ပြင်, 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး, 21052 ဒူဘိုင်း နှင့် ၂၁၀၅၅ Burj Khalifa။ အဆိုပါ Lego Group သည် ယခင်ကတည်းက အငြိမ်းစားယူခြင်းများအတွက် စျေးနှုန်းများကို လျော့ချရန် လူသိများသည်။ Black ကသောကြာနေ့ စျေးဝယ်ပွဲများ, ဒါကြောင့် p ကိုရှာပါ။artယခုနှစ်တွင် အဆိုပါ ကောင်းကင်ယံနှင့် အထင်ကရနေရာများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော သဘောတူညီချက်များ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ Lego Black ကသောကြာနေ့ ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အရာအားလုံးအတွက် ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ဤစာမျက်နှာကို စောင့်ကြည့်ပါ။ Lego Architecture.